हरियो मकै मात्र हैन यसको जुँगा पनि हुन्छ फाइदाजनक, यस्ता समस्याको लागि हुन्छ रामबाण ! – Yuwa Aawaj
जेठ १, २०७८ शनिबार 249
काठमाडौ : हरियो मकै पोलेर खानुको मज्ज्जा नै छुट्टै छ। तर यदि तपाईं मकै खाँदा त्यसको जुँगा फाल्नुहुन्छ भने अब यसो नगर्नुहोस्। मकै जुँगामा पनि धेरै पोषक तत्व समावेश हुन्छन् ।
जुन धेरै रोगको लागि लाभदायक हुन्छ। मकैको जुँगाको ड्रिंक्स बनाएर खाने हो भने यसले मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्नुका सथै यसले थुप्रै रोगहरूबाट बचाउन मद्दत गर्छ। आउनुहोस् यो कुरा जान्नुहोस् कि कसरी घरमै मकैको जुँगाको ड्रिंक्स बनाउन सकिन्छ र यसको फाइदा के-के हुन्छन् भनेर…
मकैको जुँगाको चिया एक प्राकृतिक शक्तिशाली मूत्रवर्धक एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले शरीरबाट बढी पानी र विषाक्त पदार्थ हटाउन मद्दत गर्छ, जसको कारण पानी प्रतिधारण सम्बन्धित समस्याहरू कम हुन्छ। धेरै अनुसन्धानका अनुसार लामो समयसम्म यसको प्रयोगले हृदय सम्बन्धि रोग तथा मिर्गौला रोग लगायतका धेरै स्वास्थ्य जोखिमहरूलाई कम गर्छ।
मकैको जुँगा मोटोपनाबाट छुटकारा पाउन पनि निकै सहयोगी हुनसक्छ। शरीरमा पानी प्रतिधारण समस्याको र विषाक्त पदार्थ जमेको कारण मानिस मोटोपनाबाट ग्रस्त हुन्छन्। मकैको जुँगाले यी चीजहरूलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ जसले वजन घटाउने प्रक्रिया बढ्छ। -बिगुल न्युज
Prevधन्यवाद टेकु अस्पताल मेरि आमा चार दिन्मै सन्चो हुनुभो ।
Nextडब्ल्यूएचओले भन्यो- ‘नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग आवश्यक छ ।
श्रमिक पठाउन कतारसँग जीटुजी सम्झौता भए कडा प्रतिकारमा उत्रने चे’तावनी !
निद्रा,भो’क, प्यास सबै भुलेर भेरि अस्पतालको को-भिड वार्डमा खटिएका नर्सहरु ।(तस्विर सहित)